DHAGAYSO:Qaar kamid ah garoomada Puntland oo hakad galay & Duulimaadyo ay baajiyeen roobabku
GAROWE(P-TIMES)- Kadib markii saacadihii ugu dambeeyey ay ka da’ayeen deegaanada Puntland roobab mahiigaan ah kuwaas oo sababay khasaarayaal kala duwan ayaa waxaa soo baxayey warar kala duwan oo ku aadan garoomada Puntland oo qaarkood ay ka baaqdeen duuliyaadyo maanta kasoo dagi lahaa.
Wasiirka Duulista iyo Garoomada Puntland Ilyaas Cusmaan Lugatoor oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay jiraan diyaarado kooban oo ka baaqday duulimaadyo iyo safaro ay ku iman lahaayeen Puntland, kuwaas oo ka imaanayey magaalooyinka dalka qaarkood balse intooda badan ay maanta kasoo dageen garoomada Puntland diyaaradihii kasoo dagayey.
Waxa uu sheegay wasiir Lugatoor in garoonka magaalada Qardho oo aad u jilicsan ay uga baqeen ka maamul ahaan khatar ku timaada diyaarado kusoo wajahanaa oo ay u weeciyeen dhanka garoonka magaalada Boosaaso, balse garoomada Boosaaso iyo Garowe ay u shaqaynayaan sidoodii hore oo kale.
Dhanka saadaasha hawada iyo roobabka ka da’aya Puntland ayuu sheegay in diyaaradaha waa weyn iyo khuburada dhanka cilmiga hawadu in iyagu aqoontooda kaashanaya ay kasoo saareen warbixino kala duwan balse aysan jirin cilad dhanka garoomada ah.
Garoonka Garowe ayuu sheegay in uu si wacan u shaqaynayo oo ay ka dageen diyaarado isla markaasna garoomada Puntland shaqaalaha iyo hawl wadeenada ku sugan ay haystaan qalab ku filan oo saacidi kara dhanka duulimaadyada.
Roobabka da’ay Puntland ayuu sheegay in uusan saamayn garoomada hasa yeeshee hadii ay jiraan khasaarayaal soo gaadhay ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan maalinta beri ah, isagoona dhanka kale sheegay in garoomada Puntland aysan shaqayn galabtii iyo habeenkii isla markaasna diyaaradaha Caalamiga ah ay iyagu ku xisaabtamayaan isgaadhsiinta casriga ah ee ay haystaan iyo warbixinaha dhanka hawada dalka.